समाचार - के फिल्टर गरिएको पिपेट युक्तिहरू वास्तवमा क्रस-दूषितपन र एरोसोलहरू रोक्छन्?
थर्मामीटर प्रोब कभर
कान ओटोस्कोप स्पेक्टला
के फिल्टर पाइपेट टिप्स वास्तवमा क्रस-दूषितपन र एरोसोलहरू रोक्छ?
प्रयोगशालामा, कडा निर्णयहरू नियमित रूपमा कसरी निर्धारण गरिन्छ कि कसरी महत्वपूर्ण प्रयोगहरू परीक्षण र परीक्षण गर्ने उत्तम हुन्छ। समयको अन्तरालमा, पिपेट सुझावहरूले विश्वभरका ल्याबहरू अनुरुप अनुकूलित गरेका छन् र उपकरणहरू प्रदान गर्दछ त्यसैले प्राविधिक र वैज्ञानिकहरू महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। यो विशेष गरी सत्य हो किनभने COVID-१ United संयुक्त राज्य अमेरिकाभरि फैलन्छ। एपिडेमियोलोजिष्टहरू र भाइरस वैज्ञानिकहरू भाइरसको उपचारको लागि घण्टा काम गरिरहेका छन्। प्लास्टिकबाट बनेका फिल्टर पिपेट सुझावहरू भाइरसको अध्ययन गर्न प्रयोग गरिन्छ र एक पटक ठूलो, गिलास पिपेटहरू अब पातलो र स्वचालित हुन्छन्। कुल १० प्लास्टिक पिपेट सुझावहरू हाल एकल COVID-१ perform परीक्षण गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ र प्राय: सुझावहरू जुन अहिले प्रयोग गरिन्छ उनीहरूमा फिल्टर छ जुन एयरोसोलको १००% लाई अवरुद्ध गर्ने र नमूना बनाउँदा क्रस संक्रमणलाई रोक्ने मानिन्छ। तर यी कती बढी महँगो र वातावरणीय महंगो सल्लाहहरूले देश भर प्रयोगशालाहरूमा फाइदा पुर्‍याइरहेका छन्? के ल्याबहरूले फिल्टर खाई गर्ने निर्णय गर्नु पर्छ?
प्रयोगमा वा हातमा परीक्षणको आधारमा, प्रयोगशालाहरू र अनुसन्धान केन्द्रहरूले या त गैर फिल्टर वा फिल्टर फिल्टर पिपेट सुझावहरू छनौट गर्दछ। धेरै प्रयोगशालाहरूले फिल्टर गरिएका सुझावहरू प्रयोग गर्दछन् किनभने तिनीहरू विश्वास गर्दछन कि फिल्टरहरूले सबै एरोसोलहरूलाई नमूना दूषित गर्नबाट रोक्दछ। फिल्टरहरू सामान्यतया नमूनाबाट दूषित पदार्थहरूको ट्रेस पूर्ण रूपमा मेटाउने लागत-कुशल तरीकाको रूपमा हेरिन्छ, तर दुर्भाग्यवस यस्तो छैन। पोलीथिलीन पिपेट टिप फिल्टर्सले दूषित हुनबाट रोक्दैन, तर सट्टामा दूषित पदार्थहरूको प्रसारलाई सुस्त पार्छ।
हालसालैको बायोटिक्स लेखमा भनिएको छ, “[शब्द] अवरोध यी केही सुझावहरूको लागि गलत मिस्नोमर हो। केवल केहि उच्च-इण्ड टिप्सले सही सील बाधा प्रदान गर्दछ। धेरै फिल्टरहरूले पिपेट ब्यारेलमा प्रवेश गर्न मात्र तरललाई ढिला गर्दछन्। " स्वतन्त्र अध्ययनहरू टिप फिल्टरको विकल्पहरू र गैर-फिल्टर सुझावहरूको तुलनामा तिनीहरूको प्रभावकारितामा ध्यान दिईएको छ। जर्नल अफ अप्लाइड माइक्रोबायोलोजी, लन्डन (१ 1999 1999।) मा प्रकाशित एउटा लेखले नल्टीएको सुझावहरूको तुलनामा पाइप टिप शंकु खोल्ने अन्तिममा सम्मिलित गर्दा पॉलीथीन फिल्टर सल्लाहहरूको प्रभावकारिताको अध्ययन गर्‍यो। २20२० परीक्षणहरू मध्ये, २०% नमूनाहरूले पाइपेटोर नाकमा क्यारिओभर प्रदूषण देखाए जब कुनै फिल्टर प्रयोग गरिएको थिएन, र १ poly% नमूनाहरू क्रस-दूषित थिए जब एक पॉलीथीन (पीई) फिल्टर टिप प्रयोग गरिएको थियो (चित्र २)। अध्ययनले यो पनि पत्ता लगायो कि जब रेडियोएक्टिभ तरल वा प्लाज्मिड डीएनए कुनै फिल्टर प्रयोग नगरी पाइपेट गरिएको थियो, पिपेटोर ब्यारेलको स 100्क्रमण १०० पाइपेटि withinहरू भित्र पर्थ्यो। यसले देखाउँदछ कि फिल्टर सुझावहरूले एक पिपेट टिपबाट अर्कोमा क्रस दूषितताको मात्रा घटाए पनि, फिल्टरहरूले पूर्ण रूपमा संदूषण रोक्दैनन्।
पोष्ट समय: अगस्ट २ 24-२०२०
विगत केहि वर्षहरुमा दिगो प्रयासहरु को माध्यम बाट, ACE एक वैश्विक अग्रणी निर्माता र प्रयोगशाला र मेडिकल को लागी उपभोग्य वस्तुहरु को आपूर्तिकर्ता को रूप मा विकसित भएको छ। हामी लगातार हाम्रा ग्राहकहरुलाई उत्तम उत्पादनहरु र सेवाहरु संग आश्वासन दिनेछौं।
सूज़ौ ACE बायोमेडिकल टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
+86 18 १9 12 १२386680807